Injirta dhererkeedu waa 2-3 millimitir.
Injirtu waxay jaqdaa dhiigga iyadoo ukun yaryar, oo wareegsan oo cadaan ah dhigta. Injirtu waxay si fiican uga heshaa meesha diiran, tusaale ahaan, timo ka dheer 3 sentimitir.
Injirtu ma duuli karto mana boodi karto. Sidaa darteed, ayaanad ugu baahneyn inaad tusaale ahaan dhaqdid, gogosha sariirta, shukumaanada/tuwaallada ama alaabta lagu ciyaaro. Hase yeeshee, injirtu waxay mararka qaarkood timaha iskaga faafi kartaa shanlada/gar-feedha/ iyo burushka timaha, kuwaas oo markaas u baahan in la nadiifiyo.
Adiga ayaa guriga iskaga daaweynaaya si aad iskaga saartid injirta. Ku billow inaad ku shalnayso shalnada injirta. Ka dibna daawada injirta mari timaha iyo timaha guntooda. Waxaad daawada injirta ka iibsan kartaa farmasiiga. Ku celi daaweynta toddobo maalmood ka dib.
Dhamaan dadka si wadajir ah meel ugu wada nool, waa in isku mar la wada daaweeyo. Ka fogow taabashada ay timahu taabanayaan timo kale ilaa inta aad daweyntawaqtiga labaad iyo kan ugu dambeeya aad sameynaysaan. Haddii kale waxaa jiri karta khatar ah in mar labaad injirtu dib u fiddo.
Xilliga xagaagu waa waqtiga ugu badan ee ay injirtu faafto. Sidaa darteed, waa muhiim in la shanleeyo lana daaweeyo carruurta injirta nool leh ka hor intaan xilliga deyrtu bilaabmin.